Fanandratana ny Fimaroan’ny Mozika ao Sri Lanka, Miainga Amin’ny Ampongatapaka Nentin-drazana Ka Hatramin’ny Rap An-Tanandehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2016 4:53 GMT
Nosoratan'i Amalini De Sayrah ho an'i Groundviews, tranonkalan'olompirenena ao Sri Lanka tia mampita vaovao isan'andro vao nahazo loka, ity lahatsoratra ity. Navoaka eto ambany ny endriny nasoam-panovana noho ny fifanarahana fifampizaram-botoaty.
Rako-drahona ny lanitra lolohavina eo an-tampon'ny loha. Milalao ny volon'ireo mandeha an-tongotra manaraka ny manda ny rivotra mifofo. Misy herika kely tonga ary lasa araka ny sitrapony.
Fa lavitra any, nisy ny hira.
Niainga avy any amin'ny Fetiben'ny Mozika Galle izany, izay nampitanjozotra hiaraka ireo mpitendry avy any an-tendrony avaratra, ny an-kibon'ny atsimo, ny moron-dranomasina atsinanana, ny maro tanànan'ny andrefana ary ny be havoanan'ny afovoan'i Sri Lanka ho ao amin'ny sehatra tokan'ny tanànan'i Galle.
Nanome topimaso ny fimaroan'ireo mpitendry mozika ao an-toerana, ary fankalazana ny talenta sy ny nentin-drazana miampita avy amin'ny taranaka iray mankany amin'ny taranaka manaraka, manavatsava fahantrana sy fifandirana, ny lanonana. Ny mpitendry tamin'io andro io, izay hita sary etoana ny vitsy amin'izy ireo, dia samy nitondra ny tantaran'ny vahoakany ary samy feno hambo izay tonga miaraka amin'ny fifehezana ireo fitaovany, na inona na inona karazany.
Ny Sufis — Faritany Atsinanana
Nanavatsava dia lavitra ireo, nandalo ireo lalana manandanja eo amin'ny firenena, avy any an-tanànan'i Irakkamam ao amin'ny distrikan'i Ampara. Efa saika antitra sy mihafotsy volo ny ankamaroan'ny lehilahy, ary angamba mampiseho ny zavamisy fa mila manintona tanora avy amin'ny vondrom-piarahamonina izy ireo hanao ilay fomba mozikaly. Misy ny manantena fa tsy izany no mitranga.
Vitsy ireo fitaovana miaraka amin-dry zareo – amponga kely, korintsana, ampongatapaka, kipantsona ary fitaovana fisaka iray mampahatsiahy sarpina, mamokatra feo mitovy amin'ny avy amin'ireo ankohonana. Ny feon-dry zareo, ao anaty hiram-bavaka mifototra ain'ny soratry ny poeta Sufi tranainy, no mitombo hamafy sy angovo, miharihary ny fifandraisan'ny teny sy ny fihetsiketsiky ny hita ao anatin'ny fihetsiky ny vatan'izy ireo.
Mpivelo Amponga Sandasi — Colombo
Mitafy mainty, endrika feno fahatokisan-tena no mivoaka avy amin'izy ireo raha miomana hiakatra ny sehatra ry zareo, ireo tanora mpianatra avy amin'ny Oniversiten'ny Zavakanto ara-Maso sy ny Fanatontosana Hetsika ara-javakanto no mandrafitra ny iray amin'ireo tarika vehivavy daholo vitsy miara-mively amponga ao Sri Lanka.
Ankilan'ireo tarika mbola avy any an-tsekoly, dia lehilahy no mibahantoerana amin'ny fitendrena ampongalahy ao an-toerana. Nozarin'i Dinusha Sandamali Wijenayake, tanoravavy za-draharaha amin'ny mozika ao an-toerana, ireo mpively ampongan'i Sandasi nahasahy hiditra an-tsehatra ireo hametraka marika ho hery iray ankatoavina ny zava-bitany. Miteny ao anatin'ny fitiavana fatratra ny mozika ireo zazavavy ireo, miteny ireo fotoana sy fanolora-tena vita hahalavorary ny fanatontosan-kira ataony.
Koothu — Faritany Avaratra
Manintona ny maso avy hatrany ny fiakanjo, eny fa na dia miandry ny helatra aza ireo mpandihy hanombohana ny fampisehoana. Tanoralahy roa miakanjo toy ny leoparda, ao anaty loko laoranjy manjelanjelatra manontolo, ary roa hafa miakanjo ho toy ny lehilahy iray sy vehivavy iray, feo amin'ny volo lava, tsipìka sy ireo zana-tsipìka vitsivitsy. Manomboka amin'ny fiafenan'ny leoparda ao an'ala ity zana-tantara ity – tamin'ity indray mitoraka ity, nafotaky ny orana nirotsaka nandritra ny andro ny ahitra misavoritaky ny kianja filalaovana fanatanjahantena – sy ny fihomehezana nanaraka ireo olona roa nandeha nihaza.
Ny Koothu dia vondrom-piarahamonina iray manao endrika kanto ahitana tantara fohy fampihomehezana, miaraka amin'ny feo mihiaka sy ny dobok'ampongan'ny tarika mpitendry mozika vitsivitsy. Fomba iray andalam-pahafatesana hita amin'ny morondranomasina atsinanana, mandrapahatonga any amin'ny saikanosy any avaratra, tamin'ny ankapobeny dia nampiasaina hamariparitra ireo tantara avy amin'ny fotoana taloha nampalaza ny Tamil fa tsy voafetra ho amin'izany ihany. Raisiny ao ny mpandray anjara sy ny fomban'ny tanànakely manatontosa azy ity, manome isaky ny fampisehoana iray ireo antsipirihany miavaka tsara. Famantarana ireo tanora manao akanjo tandrefana fa ampianarina amin'ny taranaka vaovao, amin'ny fomba miadana dia miadana saingy tsy mihemotra intsony, ny koothu.
Thappu — Faritany Avaratra & Avaratra-Atsinanana
Mitsahatra ankehitriny ny erika, ary manao izay mety indrindra ny vehivavy hiomanana amin'ilay zavatra. Mandeha ny fikojakojana tarehy, apetraka eo amin'ny handrina ny pottus ary tazonina haingana hankeny amin'ny afo novelomina eo amin'ny tany mando ny ampongatapaka, maneno ny meziora fanarahamaso ny hatsaran'ny feo manamarika fa hanomboka ny anjaran-dry zareo. Mandeha haingana ny gadon-kiran-dry zareo, misoritra eny amin'ny tavan-dry zareo ny tsiky raha mively ny ampongatapaka ry zareo, ny tongotry ry zareo kosa mandihy manaraka ny gadon-kira.
Nanomboka tao anatin'ny fanantenana hampiasa ny tantara tsangana hanombohan-dresaka amin'ireo ataon'ny fiarahamonina anjorom-bala ny Kaveri Kala Manram, hetsika ara-kolontsaina sy zavakanton'ny vehivavy. Teloambinifolo taona sy famindran-toerana imbetsaka taty aoriana, dia nivelatra hamaha ny filàn'ny fianakaviana maro napetraka hanabe voho tany sy hanangana indray ny fiainan-dry zareo any avaratra, izay matahotra ny ady an-taonany eo amin'ny tafiky ny governemanta sy ny mpioko any. Sarotra ihany ity dingana ity ho an'ny tsirairay, ka dia nentin'ny tarika ny fikambanana hiaraka amin'ny alalan'ny hira sy ny dihy, hanangana indray ny ny herintsain'ny tsirairay sy ny tanjaky ny fikambanana (vondrom-piarahamonina).
Kolam — Faritany Atsimo
Mironjina ny sodina mafy faneno, manakaiky feo sy tanjaka amin'ny trompetra, miaraka amin'ny ampongatapaka tokana , hahatonga ny mpitantara hahavita ny fitantarana. Mijoro amin'ny zoro iray amin'ny sehatra ny tava maitso sy mavo tsy mikimpy maso izay toa manopy maso any ambadiky ny fanahy. Hisaritaka kely iray segondra ianao, manifikifika ny lohanao hahatsiarovanao fa vita sokitra avy amin'ny hazo izy io.
Raha tarihina indray mankany amin'ny fetibe, raha misy olona iray nisafidy ny lalana lavitra mahafinaritra kokoa, dia mivantana manavatsava any amin'ny toerana nahaterahan'ny sarontava sy ny kolontsain'ny fandihizana amin'ny sarontava ao Sri Lanka. Tukkawadu Gunasena sy ny razambeny dia tondroina ho mpamakilain'ny fandihizana amin'ny sarontava tao Ambalangoda, ary azo zohiana hatrany amin'ny 250-300 taona ny fisian'ity tiropy miavaka ity. Izany no niteraka ny vondrona mpandihy kolam voalohany ao amin'ny faritra manodidina, ary azo jerena ao amin'ny Mozea Nasionaly ny asam-pamoronana nataon'ireo mpanao sokitra nanao ireo sarontava ireo.
Karagam — Faritany Afovoany
Eo amin'ny soroky ny lehilahy iray ilay zazavavy kely no mnitandrina fatratra mitady fahamarinan-toeran'ny zavatra lolohaviny . Mitombina tsara eo ambony lohany ny vazim-boninkazo rehefa mihodina izy, mampanonja ny tanany hanaraka ny mozika izy, ary tsy manao fahadisoana mihitsy rehefa mandingana, zara raha mihetsika eo ambony lohany ny vazy. Rehefa napetraka eo amin'ny tany, dia mbola nanohy ny dingana ataony izy sy ireo mpandihy hafa namany, ary izy rehetra ireo samy mampiseho ny hamaivanan'ny tongony ao anaty fahatokisan-tena sy ny fahitsiana ao anatin'ny hetsika ataon'izy ireo.
Karagam dia endrika dihy naharitra zato taona avy any an-kavoana afovoany, noforonina sy nohirain'olona iray antsoina hoe Marimuttu. Nanadino ny ampongany izay tokony hiaraka amin'ny mpandihy araka ny nentin-drazana ity tarika ity, nanadino izany tao amin'ny hetsika sy ny korontana nahatratra ny vondrom-piarahamonina misy azy tao anatin'ny telopolo taona farany. Rehefa afa-nandrakitra ny hirany izy ireo dia afa-namerina indray ny fombany sy ny ny fanatontosana ny zavakantony.
Rap An-tanandehibe — Colombo
Asaina mandroso ny tangoron'olona, mampisy fanolora-tena sy fifampikasohana amin'ny rappers izay manatontosa hira amin'ny fiteny Sinhala sy Tamil. Mifampibitsibitsika ny tanora ao an-toerana, tsy mino fa azo atao izany rap amin'ny teny Sinhala sy Tamil tsara. Gaga amim-pahafinaretana ry zareo. OJ no nanomboka ny fotoana; avy any Nuwara Eliya izy ary nanoka-tena hi-rap amin'ny tenin-dreniny, fifandraisana miseho ao amin'ny teniny sy ny fitiavany mandritra ny fotoana nihirany.
Miresaka tsy misy tahotra ny toe-draharaha ankehitriny i Pamuditha ‘Zen’ Anjana, mpikatroka mpanandratra ny feony an-tserasera avy amin'ny Dematagoda. Shafni, avy amin'ny duo Krema Diaz indray, miresaka ny fiainan'ny tanora iray ao Galle, miaraka amin'ny gadona mahatonga ny mpijery hanaraka.
Nanatevin-daharana azy telo i Imaad Majeed, poeta, mpihira, rapper, mpanoratra hira mifantoka amin'ny resaka sosialy, ho fiaraha-miasa amin'ny hira mitondra ny lohateny hoe ‘The Ballad of Wednesday Night’ [Ny doladolan'ny Alarobia Alina] ; hiram-pitiavana, mifantoka amin'ny ankapobeny amin'ny resaka ataon'ny olona iray momba ireo sakana ara-tsosialy mahatonga ny olona hifanavaka. Fisarahana ara-tsaranga, volon-koditra, fivavahana, fiteny izay anantenan-dry zareo fa ho fantatry ny taranaka tanora tsara ahafahan'izy ireo mandresy izany.
Tato.no nivoahan'ny lahatsoratra voalohany. Ny lahatsoratra, sary ary ny fandraisam-peo rehetra dia novokarin'i Amalini De Sayrah ho an'ny GroundViews avokoa.